Wasiirka Maaliyada Maamulka Puntland oo ay Tacshiirad ku fureen ciidamo hubaysan | maakhir.com
Wasiirka Maaliyada Maamulka Puntland oo ay Tacshiirad ku fureen ciidamo hubaysan
March 21, 2008 in Somalia
Bosaaso:- Sida ay warar nagu soo gaadhayaan wasiirka Maaliyada Maamulka Puntland Maxamed Cali Yuusuf (Gaa Gaab) iyada oo ay rasaas ooda kaga qaadeen ciidamo ka tirsan isla maamulka Puntland oo jooga jidak Laamiga ah ee Tuulada Al-Xamdulilaha,lama yaqaan ujeedka ka danbaysay in wasiirkaasi ay rasaas ku furaa ciidamadankaasi,in kastoo ay soo baxayaan warar hordhac ah.
Ilaa iyo hada lama sheegin wax khasaare ah oo ka soo gaaray Wasiirka Maaliyada Puntland rasaastaasi, iyada oo dadku isweydiinayaan sababta ciidamadaasi ay rasaasta ula dhaceen Wasiirka.
Dadka Qaarkiis aya falkan ku micneeyay in uu yahay mushahar la’aanta ciidmada soo wajahday. Balse Warar kale oo dad ku dhow dhow Wasiirka Maaliyada Mr. Gaagab laga soo xigtay ayaa sheegaya inay jirto xurguf maalmihii danbe u dhexeysay wasiirka Maaliyada iyo Wasiirka aminga Puntland C/laahi Siciid Samater.
Rasaasta lala dhacay Wasiirka Maaliyada ayaa keentay in Wasiirka uu ka baaqdo shir muhiim ah oo ka dhacayey Hoteel Huruuse Boosaso kasoo looga hadlayay arrinta u dhexeysa ganacsatada makiinada iyo Dowlada.
Isku soo wada duboo waxaa aad looga dareemayaa halka uu ka deganyahay Magaalada Boosaso Wasiirka Maaliyada ilaalo xoog leh iyo baritaano ay sameynayaan ilaalada Wasiirka Maliyadda Puntland.
Falkan ayaa noqonaya midkii ugu horeeyey in Wasiir ka tirsan Maamulka rasaas lagu rido , inkastoo arrimahan oo dhan ay isugu biyo shubanayaan dhaqaale xumada haysa ciidamada Puntland, hadana si kastoo Ciidamadu Mushaar u waayaan ma dhici jirin inay rasaas la beegsadaan Madaxda Puntland.
Dowlada puntland ayaa ku celcelisa habeen iyo maalin inay wax ka qabanayaan Amaanka guud ee deegaanada Puntland , hadana dowladu uma muuqato mid xil iska saarta wax ka qabashada dhibaatooyinka kala duwan ee ka taagan deegaanka Puntland.
Waxa jira warar dheeraad ah oo iyana sheegaya inay jiraan wali Cabsi xoogan oo laga qabo in la weeraro hooyga uu Mr Gaab Gaab ka Degan yahay Gudaha Magaalada Bosaaso.
« Marakab siday Cunto Gar Gaar ah ayaa soo gaadhay Dekeda Magaalada Muqdisho
Gudoomiyaha Gobolka Madar ee Maamul Goboleedka Maakhir ayaa Qabtay Shir saxaafadeed »